Xildhibaannadii sameystay madasha Horusocod oo beeniyay in ay mucaaradyihiin | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Xildhibaannadii sameystay madasha Horusocod oo beeniyay in ay mucaaradyihiin
Xildhibaannadii sameystay madasha Horusocod oo beeniyay in ay mucaaradyihiin
May 18, 2017	23 Views
Xildhibaanno ka tirsan DGolaha shacabka islamarkaana dhawaan magaalada Nairobi kaga dhawaaqay Madal ay u bixiyeen horusocod ayaa sheegay in aysan ahayn mucaarad ka dhan ah dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Kulanka Maanta ayaa waxaa shir guddoominayay C/rashiid Maxamed Xiddig oo la sheegay in uu hormuud u yahay Madasha Nairobi lagu dhisay ee la sheegayo in ay waddo mooshin ka dhan ah Madaxweyne Farmaajo.
Kulanka ay maanta yeesheen ayey ku beeniyeen warar lagu qoray Baraha Bulshada oo sheegayay in ay mooshin ka wadaan Dowladda Madaxweyne Farmaajo,waxaana ay ku tilmaameen war aan sax ahayn.
Kulankan ayey ka sheegeen in Madasha horusocod tahay madal la doonayo in looga dhamaado Qabyaaladda islamarkaana lagu joojiyo ,waxaana ay ku dareen in aysan iyaga ahayn Dowlad Dumis.
Ilaa Bisha Julay ayey sheegeen in ay madashan furantahay,waxaana ay ujeedadoodu ku sheegeen in laga gudbo qabyaaladda loona gudbo hannaanka Axsaabta,madashana loo dhisay in ay muujiso kaliya dhaliilaha Togan ee dowladda.